Google zụtara ụlọ ọrụ nwere ọ glassesụ glassesụ iko igwe North | Gam akporosis
Google zụtara ụlọ ọrụ nwere ọ glassesụ glassesụ smart igwe North
Google so na ndị izizi itinye ego na iko smart, Google Glass, iko ndị Google hapụrụ n’azụ lekwasị anya na azụmahịa ụwa (dị ka Hololens nke Microsoft) n'ihi ihe egwu nzuzo nke ijikọ igwefoto na mpụga, ịghara ịkọ banyere ụdị ọhụụ ọ gosipụtara.
N'agbanyeghị eziokwu ahụ Google hapụrụ ọrụ ahụ na ndabere, onye nrụpụta Canada North trụrụ ọrụ n'otu echiche mana na-ejikọghị igwefoto na mgbakwunye na-enye ihe ngosi ọdịnala ọdịnala iji mee ihe. Anya m nke iko ndị a na-egosipụta ọkwa, ọkwa nke anyị nwere ike si na-emekọrịta site na mgbanaka nke bụ akụkụ nke set.
Ihe a niile dị mma, mana kemgbe Disemba 2018 ka ọ mepere ụlọ ngosi izizi ya, obere etinyela 1000 iko smart smart na ahịa (Ha ruru ihe dị ka $ 1.000). Ná ngwụsị afọ gara aga, ọ chụrụ ndị ọrụ karịrị 500 ma chụpụ akara ire ere tupu ego ha agwụ.
Google nwere mmasị na ọrụ ahụ, yana dịka mgbasa ozi Globe na Mail si kwuo, akwụ ụgwọ nde 180 maka ụlọ ọrụ na patents, ihe ụlọ ọrụ teknụzụ niile nwere mmasị na ya. O yikarịrị ka ebumnuche Google adịghị aga ụdị iko a kama ọ bụ site na patent mara mma.
Anyị na-ekwu maka a usoro nchịkwa neuro-muscular a na-akpọ Myo. Myo bụ ụdị mgbaaka anyị na-etinye n’egedege ihu na nke na-atụgharị uche na mmegharị anyị na-eme, ma ihu na aka, iji meghachi omume n’otu ụzọ ma ọ bụ ọzọ.
N'agbanyeghị ọkwa ọkwa nkwekọrịta n'etiti Fitbit na Google, nke a akabeghi iwuka ha na-eche ọga n'ihu site n'aka ndị na-achịkwa iwu imegide ntụkwasị obi. Anyị ga-ahụ iko dị mma n'okpuru akara Fitbit? Oge ga-agwa.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Noticias » Google zụtara ụlọ ọrụ nwere ọ glassesụ glassesụ smart igwe North
Redmi 9A na 9C, ekwentị ọhụrụ Xiaomi abụọ dị oke ọnụ ala nwere nnukwu batrị
Olee otu usoro nlekọta nke ekwentị Huawei si arụ ọrụ